जसले माटोलाई देशको नक्सामा जोडे तिनैलाई गाली गरेर कागजी विजयोत्सव मनाउन मिल्छ र ? « हातमा खबर-जहाँ तपाइँ, त्यहीं खबर
जसले माटोलाई देशको नक्सामा जोडे तिनैलाई गाली गरेर कागजी विजयोत्सव मनाउन मिल्छ र ?
प्रकाशित मिति : २०७७, ३१ जेष्ठ शनिबार २१:५५
‘राजतन्त्रले गुमाएको भूमि गणतन्त्रले फिर्ता ल्याउँदै छ ।’ यो वाक्यको अर्थ के होला ?
-मकवानपुर हुँदै अंग्रेजी सेना काठमाडौंसम्म आउने र देश नै नरहने देखिएपछि अपमानजनक नै भए पनि ‘सुगौली सन्धि’ गरेर बाँकी भूभाग बचाउने पनि गणतन्त्र नै हो कि ?
-सिक्किम र तिब्बत निलिँदै गर्दा र शक्ति सन्तुलनमा नेपाली अवस्था एकदम कम हुँदा समेत बुद्धिमत्तापूर्वक राष्ट्रिय स्वाभिमान बचाइराखेको पनि गणतन्त्रले नै हो कि ?
नबिर्सौँ, यो देशको नक्सामाथि अहिले गर्व गर्दै गर्दा, कागजमा एउटा नक्सा कोर्दै गर्दा हामी आफैले आफैलाई महान् राष्ट्रवादी ठानिरहेका छौं तर यो नक्साको आधार गणतन्त्र आउनु धेरैअघि हाम्रा पुर्खाले रगत पसिनाले कोरेका थिए । नयाँ मुलुक पनि भनिने बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर पनि गणतन्त्रले फिर्ता ल्याएको होइन । गणतन्त्रले त कागजमा अलिकति टुप्पो थपेको हो, जसलाई ‘राजतन्त्र’ले लडेरै आफ्नो बनाएको थियो । गुमाएको कुरा गर्दा कमाएको कुरा बिर्सिन मिल्छ ? हामीलाई तिनले आर्जेको भूमिको नक्सा सच्याउन मात्रै १५ वर्षभन्दा बढ़ी लाग्यो । माटो फिर्ता ल्याउन कति समय लाग्छ, थाहा छैन ।
खासमा देशको नक्सा, राष्ट्रियता र तन्त्र फरक कुरा हुन् । कुनै तन्त्रभित्र कुनै खास शासकका कमीकमजोरी हुन सक्छन्, तर कुनै तन्त्र बढ़ी राष्ट्रवादी हुन्छ भन्ने तर्क षड्यन्त्रपूर्ण या अपूर्ण छ । देशको नक्सा गणतन्त्रले कोरेको भन्ने भाष्य राष्ट्रिय एकताको मर्म विपरीत छ । यसले देशको इतिहास र एउटा पक्षलाई बहिष्कार गर्छ । देशको नक्सा देशले बनाएको हो । राजतन्त्रदेखि गणतन्त्र यही देशको एउटा इतिहास हो । बरु हामी साम्राज्यवाद र सामन्तवाद विरुद्ध भन्दै आफ्नै दाजुभाइसँग लड्यौं, आफ्नै रगतको खोलो बगायौं । तिनले त विश्वकै ठूलो साम्राज्यवादसँग लड़े । देशको सीमा विस्तारका लागि लड़े । भोलि लिम्पियाधुराको माटोमा राष्ट्रिय झण्डा गाड्न सकेछौं भने तिनीहरूको अलिकति ऋण चुक्ता हुनेछ ।
इतिहासको एकाङ्गी विश्लेषण र आलोचना न्यायपूर्ण हुँदैन । गोर्खाबाट लिम्पियाधुरा पुगेर देशको नक्सामा जोड्नेहरू राष्ट्रघाती हुने र आज नक्सामा टाँसेर हामी राष्ट्रवादी हुने भन्ने हुँदैन । आज त हेलिकप्टरबाट त्यहाँ पुग्न पनि हामीलाई ठूलै कामजस्तो लाग्छ । इतिहासमा सबै निर्णय प्रिय हुन्छन् भन्ने हुँदैन । तर त्यो बेलाको वस्तुस्थिति, भूराजनैतिक अवस्था र शक्तिसन्तुलनको अध्ययन नगरी तिनको गुणदोष केलाउन सकिन्न । इतिहासका प्राप्तिलाई संरक्षण गर्दै कमजोरीहरू हामीले सच्याउँदै जाने हो । हाम्रा कमजोरीलाई भोलिको पुस्ताले सच्याउनेछ ।
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालका लागि